ရှမ်းမီးဖိုချောင်က ရှမ်းလက်ရာသန့်သန့်လေးကိုမှ သုံးဆောင်လိုသူတွေအတွက် Shan Kitchen …….. – FoodiesNavi
ရှမ်းပြည်အလွမ်းပြေ ??? ရှမ်းရိုးရာအစားအစာလေးတွေ ?????? သုံးဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာကိုမှ ခုံမင်တပ်မက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Foodies ?????????? တို့အတွက် Foodies Navi ကနေ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေရရှိနိုင်မယ့် Shan Kitchen ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ??? ဒီဆိုင်လေးကတော့ ဒဂုံမြို့နယ်က စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ စုစည်းနေတဲ့ နဝဒေးလမ်းမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ ? ? ဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာအပြည့်အစုံကတော့ –အမှတ်(၂၆/၄) ၊ နဝဒေးလမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ?????
Shan Kitchen မှာတော့ ???????? တို့ဟူးကြော် ၊ တို့ဟူးကြော်သုပ် ၊ ဖက်ထုပ်ကြော် ၊ ကြက်အရေခွံကြော် ၊ ကြက်အတောင်ပံကြော် ၊ ကြက်ပေါင်ကြော် ၊ ဝက်နံရိုးကြော် ၊ တို့ဟူးနွေး ၊ မုန်ညင်းချဉ်ထမင်းကြော် ၊ ဝက်သားချဉ် ၊ ရှမ်းထမင်းချဉ် ၊ မာလာဟင်း ၊ အင်းလေးဟင်းထုပ် ၊ ပုဇွန်သံပုရာပေါင်း ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ ကွေ့တယို ၊ ဆန်ပြားကြော် ၊ ပဲပုပ်ထမင်းကြော် ၊ ဆန်ပြား ၊ မြီးရှည် ၊ မြေအိုးမြီးရှည် ၊ နံရိုးပေါင်း ၊ ကော်ရည် ၊ ကြက်ပေါင်းခါက်ဆွဲ ၊ မေမြို့ကော်ဖီ ၊ အသီးဖျော်ရည်မျိုးစုံစတာတွေကို သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ??? သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သားငါးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ အရသာရှိရှိချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???
ဆိုင်ရဲ့အတွင်း Decoration ပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေကိုထားရှိထားတာကြောင့် ???? ရှမ်းပြည်ကို အမှတ်ရစေပြီး သပ်ရပ်ခန့်ညားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် ထိုင်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ??? သန့်ရှင်းပြီးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ရှမ်းအရသာစစ်စစ်ကိုလည်း မြိန်ရှက်စွာသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰⏰ မနက်(၈)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိဖြစ်ပါတယ် ။ Lunch Box တွေကိုလည်း Order မှာယူနိုင်တာကြောင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရသာကောင်းမွန်တဲ့ ရှမ်းမီးဖိုချောင်ကရှမ်းလက်ရာသန့်သန့်လေးကို နေ့လည်စာအဖြစ်သုံးဆောင်ချင်သူတွေအတွက်လည်း ဆိုင်ရွေးမမှားရစေဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ ???
In Restaurant Guides Tagged coffee, Fried Chicken, fried rice, fruits drinks, pork salads, Shan Noodle Leaveacomment